सबैभन्दा शक्तिशाली स्टेरॉइड माइबोलोरोन (चेक ड्रपहरू) अनलाइन | AASraw
/ब्लग/ग्यालरी/सबैभन्दा शक्तिशाली स्टेरॉइड मिबिओलोरोन (चेक ड्रपहरू) अनलाइन
प्रकाशित 07 / 19 / 2018 by Dr. Patrick Young मा लेखियो ग्यालरी. यो संग0टिप्पणी.
1 के Mibolerone छ (ड्रप जाँच गर्नुहोस्)?
2.Mibolerone Compounding फार्मेसी
3.Mibolerone शरीर निर्माण को उपयोग
4.Mibolerone (ड्रप जाँच गर्नुहोस्) प्रभाव
5। माइबिलोन आधा जीवन
7। माइबोलोन खुराक
8.Mibolerone साइड इफेक्ट
10.Buy Mibolerone अनलाइन
I.Mibolerone पाउडर आधारभूत क्यारेक्टरहरू:
1। Mibolerone के छ (बूँद जाँच गर्नुहोस्)?
Mibolerone(चेक ड्रपहरू, केस नम्बर 3704-9-4) dimethylnortestosterone (DMNT) को रूपमा पनि जानिन्छ, पहिलो 1963 मा संश्लेषित गरिएको थियो। मिबिलोरोन उपजनले ब्रान्ड नाम चेक ड्रोप र म्याटनोनको साथ प्रयोग गरेको थियो। पशु चिकित्सकको रुपमा प्रयोगको लागि यो पशुपक्षी रूपमा विशेष गरी एक मौखिक उपचारको रूपमा संकेत गरिएको थियो। यो वयस्क महिला महिला कुत्ताहरू (माइबिलोन कुत्ता) मा एस्ट्रस (गर्मी) को रोकथामको रूपमा विशेष रूपमा संकेत गरिएको थियो।
मिबोलोन एक पशु चिकित्सक ग्रेड हो anabolic steroid कि 1960 को ओजोहान द्वारा ब्रान्ड नाम ड्रप चेक को तहत र पछि को रूप मा रिलीज गरियो र पछि को रूप मा चेक ड्यूटी फूड (mibolerone कुत्ता) को जाँच गर्नुहोस। यो स्टेरॉइडको उद्देश्य गर्भवतीलाई रोक्न महिला महिला कुकुर (माइबिलोन कुत्ता) मा मासिक धर्म चक्रलाई रोक्न हो। धेरै anabolic स्टेरॉयड हार्मोन संग, र यो पशु चिकित्सकीय ग्रेड समावेश गर्दछ, यो यस स्थापना पछि लामो थिएन कि एथलीट र बडी बहालीहरूले एक प्रयोग (माइबिलोन बडी बिल्डिंग) फेला पारेन।
माइबोरोन रासायनिक विवरण
नाम माइबोलोन, डीएमएनटी
ब्रान्ड नाम ड्रपहरू, Matenon जाँच गर्नुहोस्, औषधिएको कुत्ता खाना जाँच गर्नुहोस्
आणविक सूत्र C20H30O2
पिल्ट बिन्दु 168-171 ° C
भण्डारण तापमान रेफ्रिजरेटर
रंग सेतो वा अफ सेतो पाउडर
माइबिलोरोन शरीर निर्माणको बारेमा, माइबिलोरोन (चेक ड्रपहरू) कहिलेकाहीँ कहिल्यै बनाइने सबैभन्दा शक्तिशाली स्टेरियोडहरू मध्ये एक हो। यो पनि साइड इफेक्टको शर्तमा बनाइएको सबैभन्दा धेरै समस्यात्मक स्टेरियोडहरू मध्ये एक हो। यो स्टेरॉइड प्रायः नौसेना बोसोल्डर वा एथलीटहरूले प्रयोग गर्दैन। तपाईले सामान्यतया यसको प्रयोग पूर्व-युद्ध वा पावर लिफ्ट प्रतियोगिहरूमा सीमित गर्न पाउनुहुनेछ। केही बाहिरीहरूले यो पूर्व-प्रतियोगितालाई अन्तिम हप्ता वा अतिरिक्त धक्काको लागि अफ-सिजनमा सहायता गर्न प्रयोग गर्नेछ, तर यो धेरै साधारण शरीर निर्माण गर्ने स्ट्रिइड होइन। हामी यो सबैभन्दा शक्तिशाली स्टेरॉइड माइबिओलोनोन (चेक ड्रपहरू) को बारेमा जारी राख्नेछौं।
2। Mibolerone Compounding Pharmacy
Mibolerone कहाँ छ? कसरी माइबिओलोन बनाउन (ड्रप जाँच गर्नुहोस्)?
पहिले उल्लेख गरिसकेपछि, माइबोलोन एक स्तरीय एनाबोलिक हो जुन पहिलो एक्सएनक्सक्समा बनाइयो कम्पनीको उपजोनको रूपमा। यस समय अवधिको समयमा, यो नामको मूल नाम थियो ड्रपहरू जाँच गर्नुहोस्, तर त्यस पछि, यो केहि फरक मा परिवर्तन गरियो: औषधि कुत्ता खाना (माइबिलोरोन कुत्ता) जाँच गर्नुहोस्। यो स्टेरॉयड विकसित भएको मूल कारण गर्भवती हुने महिला महिला कुकुरहरूलाई रोक्न थियो। यो विशेष गरी महिला कुत्तों को मासिक धर्म चक्र रोक्न को लागी काम गरे, र यो पुरा तरिकाले बनी रहयो थियो, एक डिब्बाबंद मदद को इरादा संग डिजाइन को उत्पादन। तथापि, धेरै औषधिहरू जस्तै एक उद्देश्य, मानव प्राणीहरू, विशेष गरी एथलेटिक्स र बिजुली निर्माणको एरेन्जमा ती अन्य कारणहरूका लागि धेरै उपयोगी पाइन्छ।
कसरी माइबिलोरोन (ड्रपहरू जाँच गर्नुहोस्) कसरी गर्ने भन्ने बारे, माइबिलोरो अर्को प्रसिद्ध प्रयोग स्टेरियोड्स नान्ड्रोण्डोनसँग सम्बन्धित छ। Mibolerone एक मौखिक एनाबोलिक एन्ड्रोजन हो, र यसलाई एक अन्य लोकप्रिय स्टेरॉयड, नान्ड्रोण्डोन बाट व्युत्पन्न गरिन्छ। यो वास्तव मा एक देखि बदलएको छ Nandrolone। ड्रन्ड्सहरू मात्र7र Nandrolone हार्मोनको 17th स्थितिमा एक अतिरिक्त मेथिल समुह थपेर सिर्जना गरीन्छन्। 7th स्थितिमा यो थप गरिएको समूहले यसको androgenic प्रभावको सन्दर्भमा धेरै अधिक शक्तिशाली बनाउँछ, र यसले कार्यबाट 5-अल्फा कमकाट्ज एंजाइम रोक्छ। 17th स्थितिमा अतिरिक्त समूहले हार्मोनलाई मौखिक इन्जेक्शनको समयमा क्षति पुर्याएको छ। त्यसैले प्राविधिक रूपमा, यो एक C17-अल्फा alkylated anabolic स्टेरॉइडलाई मानिन्छ।
केवल यो सानो, चालीस बट्टी परिवर्तन संग, यो Nandrolone हार्मोन सुपर शक्तिशाली र सुपर शक्तिशाली बनाउँछ। यो शाब्दिक एक शक्तिशाली शक्तिशाली स्टेरॉइड एन्ड्रेंगको सिर्जना हो जुन यो सिर्जना गरिएको छ, यति धेरै, किज्जन वास्तवमा भन्छ कि चेक ड्रप टेस्टोस्टेरोन भन्दा बढी छ पटक पटक शक्तिशाली छ र लगभग तीन चोटि एक एन्ड्रोनिकिक कम्पाउन्डको रूपमा। कार्यात्मक रूपमा, यो उनीहरूको सन्दर्भमा अझ धेरै शक्तिशाली जस्तो देखिन्छ।
3। माइबोलोन सौन्दर्य निर्माणको प्रयोग
मिबोलोरोन शरीरशैलीहरू, पावर लिफ्टहरू, बलियो एथलीटहरू र लडाकूहरूद्वारा प्रयोग गरिन्छ, सबै प्रतिस्पर्धाको दिन बढ्ने आक्रमण र प्रदर्शनको उद्देश्यका लागि। मिबिलोरोन (चेक ड्रपहरू) प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छन् जब प्रतियोगिता भन्दा पहिले केवल 30 मिनेट प्रयोग गरिन्छ। उपयोगकर्ताले आक्रामकता, फोकस र प्रतिस्पर्धी ड्राइभको अनुभव बढाउनेछ। यद्यपि यो स्टेरॉइडमा कुनै पनि सीधा स्टिम्युलेट छैन, यसले एक प्रकारको एरेजन ओवरलोडको माध्यमबाट सीएनएस (केन्द्रीय तंत्रिका प्रणाली) मा एक धेरै महत्त्वपूर्ण कार्य देखाउँछ। यो एथलीटहरू द्वारा यो औषधि प्रयोग गरिन्छ एकमात्र कारण हो, किनकि मांसपेशिहरु लाभ यो औषधि संग अनावश्यक छैन।
Mibolerone एक मौखिक anabolic स्टेरॉइड हो, structurally nandrolone बाट व्युत्पन्न। यो एजेन्ट विशेष रूपले 7,17-dimethylated nandrolone हो, यसको गैर-मेथिलाइटेड आमाबाबु भन्दा बढी एक एनाबोलिक र एन्ड्रोजेनिक एजेन्टको रूपमा अधिक शक्तिशाली। वर्षौंमा, माइबोरोनोनले शरीर निर्माणकर्ताहरूको बीचको प्रतिष्ठा कमाएको छ जुन कहिल्यै बनाइएको सबैभन्दा शक्तिशाली हो। यो एक प्राविधिक अर्थमा सही छ, किनकि यो माइक्रोग्राममा केवल एक चुरोट केहि व्यावसायिक स्टेरॉइड उत्पादनहरू प्रभावकारी छ, होइन मिलिग्राम, रकम। मानक पशु आश्रयको समयमा, माइबिलोनले 41 पटक मिथाइलटेस्टोस्टेरोनको एनाबोलिक गतिविधिलाई मौखिक रूपमा दिईएको थियो। यसको विपरीत, यो मात्र एन्ड्रोजनिक गतिविधिको 18 पटक थियो। यद्यपि यी गुणहरू यस एजेन्टसँग दृढ रूपमा स्पष्ट छन्, यसले मुख्य रूपमा एनाबोलिक वर्ण (एक सापेक्ष भावमा) राख्छ। तथापि यो एस्ट्रोजेनिक र प्रोजेन्जेक्टिङ्ग गुणहरू यो औषधीको साथ धेरै स्पष्ट छन्। एथलीटहरूमध्ये यो सामान्यतया प्रशिक्षणको बिस्तार चरणहरूमा प्रयोग गरिन्छ, वा कसरत वा प्रतिस्पर्धा गर्नुअघि आक्रामकता उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ।
मिबोलोरोन स्टेरॉइड प्रायः नौसेना शरीर बत्ती वा एथलीटहरू द्वारा प्रयोग गरिएको छैन।
4। माइबिलोरोन (ड्रप जाँच गर्नुहोस्) प्रभावहरू
एक शक बिना, माइबिलोरोन (चेक गिरावट) एक लोकप्रिय ड्रग भनेको प्राथमिक कारणहरू यसको अत्यधिक शक्तिशाली र अरेजनिक प्रभावको कारण हो, अन्य शब्दहरूमा, यसको क्षमता आक्रामकता बढाउन र बलियो बनाउँछ। यही कारणले यो लडाईहरू, लडाकू एथलीटहरू, र बलियो एथलीटहरू पनि लोकप्रिय छन। ती उच्च प्रतिस्पर्धाहरूमा प्रयोग गरिन्छ, यो यसको प्रभावको नियममा के गर्न सक्छ धेरै स्पष्ट छ; यसले यसलाई अविश्वसनीय रूपले उपयोगी र व्यावहारिक बनाउँछ। लोकप्रिय विश्वासको विपरीत, अधिकांश एनाबिक स्टेरियोडले आक्रामकता बढाउन सक्दैन। पक्का, उनीहरूले फोकस बढाउन र अधिक ध्यान र प्रेरणाको लागि टेस्टोस्टेरोन को स्तर बढाउन सक्छ, तर जहाँसम्म संयोजन, गुस्सा आक्रामकता हुन्छ, केहि औषधीहरूले यसको असर मिबरबेरेरोनमा छ। आक्रामकता कुनै पनि खराब कुरा हो, या त। यदि तपाईं एक स्तर-हेड गरिएको, जिम्मेवार व्यक्ति हुनुहुन्छ भने, तपाईं उचित रूपमा प्रयोग गर्दा आक्रामकताको ठूलो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि, यदि कसैले कुनै खराब रवैया गरेको छ भने, यो तिनीहरूलाई दिइने वा माइबिलोरोन (ड्रप जाँच गर्नुहोस्) प्रयोग गर्न अनुमति नदिने निर्णय हो।
त्यसो भए उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराईरहेकी छिन्। यसका लागि उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराईएको छ। यो जिममा बढी आक्रामक लड्नको लागी ड्रग लाग्ने औषधि लिन धेरै आम एथलीटहरू छन्, तर शरीर सौन्दर्यहरूले यसलाई प्रतिस्पर्धात्मक परिप्रेक्ष्यबाट ती अन्तिम हप्ताहरू प्राप्त गर्न प्रतियोगिता आहारको अन्त्यमा प्रयोग गर्नेछ। मा शरीर निर्माण, prep धेरै गाह्रो छ, र ती पछिल्लो हप्ताहरूमा, जहाँ समय सबै भन्दा कठिन हुन्छ, त्यहाँ सधै एक अन्तिम मानसिक धक्काको लागि आवश्यक छ, र Mibolerone (ड्रप जाँच गर्नुहोस्) तिनीहरूलाई लागि गर्न सक्षम छ। यो ध्यान दिइन्छ कि यसको निरन्तर प्रयोग केही सुगन्धको कारण हुन सक्छ, तथापि, पानी अवधारण संभावना छ। उनले भने, यो केहि चीज हो जुन अन्य पहलुहरु को तुलना मा एक सम्झौता को लागी ठूलो नहीं हो किनकि यति चुनौतीपूर्ण छ।
सिद्धान्तमा, माइबिलोरोन (चेक ड्रपहरू) एक औषधि हो जुन केही शक्तिशाली एनाबोलिक गुणहरू हुन सक्छ, तर यसको कारणले गर्दा तपाईंको स्वास्थ्यको लागि कस्तो खतरनाक हुन्छ, यसले यो उद्देश्यलाई यस औषधिको लागि मुख्य रूपमा प्रयोग गर्न कुनै पनि अर्थ छैन। उनले भने, कसैलाई अझ राम्रो छ कि यो केवल आक्रामकता को उद्देश्य को लागी ले, र फेरि, वास्तव मा यो एकमात्र कारण हो कि यो कति धेरै खतरनाक हुन सक्छ यो खतरनाक छ।
माइबिलोरोन (ड्रपहरू जाँच गर्नुहोस्)4घण्टा (माइबिलोन आधा जीवन) को आधा-जीवन छ, जुन सजिलो हुन्छ (समय पछि लागू पदार्थ र यसको प्रभाव प्रयोगकर्ताको शरीर छोड्छ)। यसैले एथलीटहरूलाई यसलाई 20 मिनेट प्रयोग गर्नका लागी सल्लाह दिइएको छ जुन पहिले एक्सनक्स मिनेटमा 30 मिनेटमा उनीहरूलाई बढावा दिन आवश्यक छ।
6। माइबिलोन चक्र
त्यहाँ कुनै वास्तविक प्रमाण छैन वा अन्यथा एथलेलेटहरू "चक्र" (माइबोरोन चक्र) मा चेक ड्रपहरूको प्रयोग गर्दै छन् यो अन्य स्टेरियोड्ससँग सामान्य छ। यो देखिन्छ कि यो स्टेरॉयडले आक्रामकता र प्रतिस्पर्धी ड्राइभ बढाउनको लागि पूर्व-कार्यक्रम स्टेरॉइडको रूपमा ठोस दाबी गरेको छ। तथापि, यस दवाव मा मांसपेशिहरु मा कुनै उल्लेखनीय लाभ प्राप्त गर्न को कारण यो तथ्य केवल लघु2हप्ता स्पैन्स मा प्रयोग गर्न सकिन्छ, सानो माइबिलोरोन खुट्टा मा। यसको कुनै पनि समय, वा एक भारी खुट्टा, र स्वास्थ्य चिन्ताहरू सम्भव छन्।
Mibolerone सामान्यतया 30 मिनेटको प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा भन्दा पहिले प्रयोग गरिन्छ, किनभने ड्रगले छोटो माइबिलोरोन आधा जीवनको सुविधा दिन्छ। यो औषधि लिनको लागि मोडले बहस भइरहेको छ। यो जिब्रोमा मिबिलोरोनको ट्याब्लेट राखिएको छ। यो प्रयोगको प्रयोगले तत्काल आक्रामकता र बलियो वृद्धिलाई अनुमति दिन्छ। यो लागू औषधिको बारेमा4घन्टाको अन्त्य हुन्छ, त्यसपछि पदार्थ मानव निकायबाट हटाइएको छ।
एक सामान्य माइबिलोन खुराक भनेको5माइग्स को माइबिलोरोन को बारे मा हो जुन यो प्रशिक्षण या प्रतिस्पर्धा को एक महत्वपूर्ण पल देखि 30 मिनेट लिया जाना चाहिए। सामान्यतया, यो ड्रगले एक्लै लिईएको छ, कुनै माइबोलोरोन चक्र, अन्य उपचारहरूसँग स्ट्याकिङ बिना।
सामान्यतया, धेरै अन्यसँग anabolic drugs, Mibolerone (चेक ड्रपहरू) एक चक्र को समयमा प्रयोग गरिएन। यो केवल एक पूर्व-घटना स्टेरॉइड हो जसले आक्रामकता र प्रतिस्पर्धी ड्राइभलाई बलियो बनाउँछ। प्रशासन को एक छोटो पाठ्यक्रम र कम माइबिलोन खुराक मा मांसपेशियों को लागि मासूमोन को उपयोग मा मासूम प्राप्त गर्न को लागी एमबिलोरोन को उपयोग गर्दछ। अर्कोतिर, यसलाई लामो समय वा उच्च माइबिलोन खुराकमा स्वास्थ्य समस्या बढाउन सक्छ। जस्तो कि माइबिलोरोन आधा जीवन निकै छोटो छ, औषधिले प्रतियोगितामा 30 मिनेट लिनु पर्छ।
यदि तपाइँ साँच्चिकै यो औषधि लिन आवश्यक छ भने, तपाईं हाम्रो वेबसाइटमा एमबिओलोन अनलाइन खरीद गर्न सक्नुहुनेछ www.aasraw.com, तर हेपिटरप्रोटेक्टरहरूले माइबिओलोनको विषाक्त क्रियाकलाप घटाउन नबिर्सन।
8। माइबोलोन दुष्प्रभाव
Mibolerone साइड इफेक्ट धेरै छन्। यो सबैभन्दा शक्तिशाली स्टेरॉइड मध्ये एक र सबैभन्दा खतरनाक एनाबिक स्टेरियोड्स हो। किनकि माइबिलोन साइड इफेक्ट यति बलियो छ यो कुनै स्ट्रिइड होइन जुन कसैलाई साँच्चै प्रयोग गर्नुपर्दैन। त्यहाँ धेरै राम्रो विकल्पहरू छन्। बढ्दो आक्रामकताले युद्धलाई प्रलोभन गर्नु भन्दा पहिले भन्न सकिन्छ, तर यो स्ट्रिइडसँग सामान्यतया खतराहरू खतरा हुनेछ। यो मतलब छैन कि व्यक्ति मर्नेछ, र यो माइबिलोरो साइड इफेक्ट्स को डिग्री देखि बचने को लागी सम्भव छ (उनि पुरा तरिकाले देखि बचन सक्दैन) .बोबोरोन दुष्प्रभाव मा शामिल हुन सक्छ:
माइबिलोरोन साइड इफेक्ट - एस्ट्रोजेनिक:
Mibolerone शरीर द्वारा aromatized छ, र 7,17-dimethylestradiol (उच्च जैविक गतिविधि संग एक एस्ट्रोजन) को रूपान्तरण को कारण एक अत्यधिक एस्ट्रोजनिक स्टेरॉइड को रूप मा मानिन्छ। Gynecomastia उपचार को समयमा एक चिन्ता हुन सक्छ, विशेष गरी जब सामान्य चिकित्सकीय खुराक भन्दा अधिक प्रयोग गरिन्छ। एकै समयमा पानी अवधारण एक समस्या बन्न सक्छ, मांसपेशियों को परिभाषा को एक उल्लेखनीय हानि को कारण बनावट को रूप मा दोश्रो पानी को बनाए राखन र वसा को स्तर को निर्माण को रूप मा। बलियो एस्ट्रोजेनिक साइड इफेक्टबाट जोगाउन, यो एस्ट्रोजनको प्रयोग गर्न आवश्यक हुन सक्छ जस्तै नोल्डडेक्स®। एक वैकल्पिक रूपमा aromatase अवरोधक जस्तै Arimidex® (anastrozole) प्रयोग, हुन सक्छ यो एस्ट्रोजन नियन्त्रणको लागि एक अधिक प्रभावी उपाय हो। तथापि, अरोमाटेज इन्डटिभर्स मानक मानक एस्ट्रोजन को रखरखाव थेरेपी को तुलना मा धेरै महंगी हुन सक्छ, र हुन सक्छ र रक्त लिपिडहरुमा पनि नकारात्मक प्रभाव हुन सक्छ।
यो नोट हो कि माइबिओलोनले शरीरमा एक प्रोस्ट्रोजनको रूपमा बलियो गतिविधि पनि देखाउँछ। प्रोजेस्ट्रोनसँग सम्बन्धित साइड इफेक्ट एस्ट्रोजनको जस्तै हुन्, टेस्टोस्टेरोन उत्पादनको नकारात्मक प्रतिक्रिया अवरोध र मोटो स्टोरेजको बढि दर सहित। प्रोजेस्टिनले माथी ऊतक विकासमा एस्ट्रोजेनको उत्तेजना प्रभाव बढाउँछन्। त्यहाँ यी दुई हार्मोनहरू बीचको बलियो तालमेल देखा पर्दछ, जस्तै कि गर्न्कोमास्टिया अत्यधिक मात्रामा एस्ट्रोजन स्तरको उपस्थिति बिना प्रोस्जेस्टिनको मद्दतबाट हुन सक्छ। विरोधी-एस्ट्रोजनको प्रयोग, जुन यस विकारको एस्ट्रोजनिक अवयवलाई रोक्छ, प्रायः माइबिलोनले उत्पन्न गर्न्कोमास्टिया को कम गर्न पर्याप्त हुन्छ।
माइबिलोरोन साइड इफेक्ट - एन्ड्रोनिकनिक:
माइबोरोनोनको एन्ड्रोजेनिक साइड इफेक्टले मुँहासे, शरीरको बाल विकास र पुरुषमा कपाल हानि समावेश गर्न सक्दछ जसलाई पुरुष ढाँचामा गम्भीरता भनिन्छ। माईबोलोरोन को एन्ड्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स मा महिलाहरु को भाइरस लक्षण पनि शामिल हुन सक्छन्; वास्तवमा, केहि स्तर मा भाइरस लगभग आश्वस्त छ।
Mibolearone साइड इफेक्ट-कार्डियोवास्कुलर:
तपाईंको हृदय रोग प्रणाली को भटकाने सबै भन्दा खराब तरिकाहरु Mibolearone लिदै छ। जब तपाईं तिनीहरूलाई लिनुहुन्छ, तिनीहरू तपाईंको कोलेस्ट्रॉल स्तरहरू, विशेष गरी तपाईको खराब कोलेस्ट्रल बनाउन जाँदैछन्, छतबाट जानुहोस्। यो पनि विद्यमान हृदय रोगको समस्या धेरै खराब छ। Mibolearone प्रयोग गर्दा यी सबै मनमा राख्नुहोस्। तपाईं राम्रो हृदय रोग स्वास्थ्य को समर्थन दिइयो एक आहार खाना चाहिए, यसको अर्थ ओमेगा फैटी एसिड, कम सरल शर्करा र कम संतृप्त वसा। राम्रो भोजन को बानीहरु को बावजूद, एक व्यायाम दिनचर्या जो कार्डियो तनाव पनि अत्यावश्यक छ। यदि तपाईं कसैलाई हुनुहुन्छ भनेर वर्णन मात्र फिट बस्नुहुन्छ, तपाईं Mibolearone संग ठीक हुनुपर्छ।
यद्यपि, यदि तपाईं वास्तवमा खराब गरीएको हृदय प्रोफाइलको साथ हुनुहुन्छ भने, यो अर्को ड्रग हो जुन तपाईले मात्र लिने प्रयास गर्नुपर्दैन। बसमा, तपाईं केवल एक-एन्टिओक्सिडेंट पूरक लिन सक्नुहुनेछ डबल-चेक कि प्रयोग गर्दा तपाईंको सबै आधारहरू आवरण गरिन्छ।
Mibolerone साइड इफेक्ट-हेपोटटोक्सिसिटी:
मिबिलोरोन एक c17-अल्फा एल्लेटेडटेड यौगिक हो। यो परिवर्तनले जिगर द्वारा निषेध देखि लागू औषधि को संरक्षण गर्दछ, र रक्तचाप पछि मौखिक प्रशासन मा दबाइ को प्रवेश को एक धेरै उच्च प्रतिशत को अनुमति दि्छ। C17-अल्फा alkylated anabolic / androgenic स्टेरियोड्स ह्यापिटोटोक्सिक हुन सक्छ। लामो समय वा उच्च जोखिमले परिणाम लिईएको हुन सक्छ। दुर्लभ उदाहरणहरूमा जीवन-धम्कीपूर्ण रोग विकास हुन सक्छ। यो प्रत्येक चक्र को समयमा जिगर प्रकार्य र समग्र स्वास्थ्य को निगरानी गर्न को लागि एक चिकित्सक को समय समयमा चिकित्सक को भ्रमण को लागि सल्लाह दी जान्छ। C17-alpha alkylated स्टेरियोड्सहरू का सेवन सामान्यतया 6-8 हप्ताहरूमा सीमित हुन्छ, बढि जिगर तनावबाट बच्नको प्रयासमा। गम्भीर लिभर जटिलताहरू दुर्लभ हुन्छन्, आवधिक स्वभावमा अधिकांश व्यक्तिहरूले मौखिक एनाबलिक / एन्ड्रोजेनिक स्टेरियोड्सहरू प्रयोग गर्छन्, यद्यपि यस स्टेरॉयडसँग विशेष गरी उच्च खुराक र / वा लामो समयसम्म प्रशासन अवधिहरूसँग बहिष्कार गर्न सकिँदैन। ध्यान दिनुहोस् कि एमबीओलोनोनको लागि अमेरिकी प्रस्तुतीकरणले केवल एक मानव अध्ययन mibolerone मा आयोजित गरिन्छ, र यो अध्ययन उच्च hepatotoxicity को कारण प्रारम्भ समाप्त भयो।
लिभर स्टेबिल, लिभ-एक्सएनमक्स, वा Essentiale Forte को लिभर डिटेक्सिफिक पूरकको प्रयोग को कुनै हेपाटोटोक्सिक एनाबोलिक / एन्ड्रोजेनिक स्टेरियोड्स लिँदा सल्लाह दिईन्छ।
माइबिलोरोन साइड इफेक्ट - टेस्टोस्टेरोन इन्डिशन:
Mibolerone धेरै प्राकृतिक प्राकृतिक टेस्टोस्टेरोन उत्पादन को दबाइन्छ।
माइबिलोरोन साइड इफेक्ट - अरू:
-सुरु सुत्नु वा अनिद्रा
- आंत आंदोलनहरु संग परेशान
आँखाका व्हाइटहरू पहेंलो सुत्न थाले
महिलाहरु मा मासिक धर्म को चक्र
महिलाहरु मा आघात स्राव र क्लैटोरल वृद्धि
महिलाहरु मा आवाज को छोडना
-यो माइकोडियल इन्फेरेशन्सको जोखिम बढ्छ
- यो प्रतिकूलता ट्राइग्लिसराइड्सलाई असर गर्छ
यो धेरै endothelial विश्राम कम गर्दछ
9। Mibolerone समीक्षाहरू
ड्रपहरू, क्यामेरा नाम माइबिलोन, सीएएस नम्बर। एनएनएमएक्सएक्स-एमएमएक्सक्स-एक्सएनएक्सक्स जाँच गर्नुहोस्, मूल रूपमा महिला महिला कुकुरहरूलाई गर्मीमा जाने क्रममा सहायताको रूपमा उत्पादन गरिएको थियो। त्यसोभए, यो पनि मानिन्छ र रौतहट, माइबिलोरोन पनि अत्यन्त प्रेन्जेन्टिभेसिटी हो जुन महिला कुत्ताहरूमा यसको प्रभावको तल्लो तंत्र हो। वास्तवमा, माइबोरोनले प्रोगस्टरोन रिसेप्टरको लागि प्रोगोस्टेनेनको बारेमा दुई पटकको सम्बन्ध छ। यो औषधि एक प्रतिष्ठा थियो जसको कारण ठूलो मात्रामा आक्रामकता बढ्दै जान्छ। यो ड्रग बोल्टस्टरोनको न्यु-एक्सएनक्सक्स डेरिभेटिभ हो र यो नोन्ड्रोलोन टेस्टोस्टेरोन भन्दा बढी शक्तिशाली र अधिक प्रोस्टेक्टिङ्गेसिटी हो, त्यसैले बोल्टस्टरोनको तुलनामा माइबिलोरोको अवस्था हो। C-3704 मा मेथिल समूह को अतिरिक्त न केवल एआर र पीआर गतिविधि को बढाता छ तर यसले अणु को विषाक्तता बढाउँछ। Mibolerone नर्सोस्स्टोस्टेरोन (nandrolone) को व्युत्पन्न हो; तथापि, यो 9-अल्फा मिथाइल समूह को परिरक्षण प्रभाव को कारण एक कम शक्तिशाली डाइड्रोनरेन्ड्रोन मेटाबोलाइट को metabolized नहीं छ।
सबैभन्दा शक्तिशाली स्टेरॉइडको रूपमा विचार गर्ने मिबोलोरोनले अत्यन्त छोटो समय अवधिमा वांछित परिणामहरू उत्पन्न गर्दछ। यद्यपि, यो मात्र हो यदि स्टेरॉइड सही समय मात्रा मात्रामा, समय सीमा भित्र, र उपयुक्त तरिकामा प्रशासित हुन्छ।
यो कारणले गर्दा माइबिलोन खुराकहरु व्यावहारिक अनुभव र विस्तृत वैज्ञानिक अनुसन्धान पछि डिजाइन गरिएको थियो। सबै मा, उत्पादन वास्तविक र प्रभावकारी छ, तर महान सावधानी संग प्रयोग गर्नु पर्छ।
10। Mibolerone अनलाइन किन्नुहोस्
AASraw एक प्रसिद्ध कारखाना हो जसले धेरै प्रकारको स्टेरियोड्स कच्चा पाउडर अनलाइन उपलब्ध गराउँछ, अनलाइन बिक्रीको लागि माइबोलोन प्रदान गर्दछ, किनकि सुजनले धेरै वर्ष पहिले जाँच ड्रपहरू रोक्न रोकिदिए, त्यसैले धेरैजसो धेरै बोतलहरू (यदि कुनै पनि) त्यहाँ ओजन द्वारा निर्मित मूल उत्पादनको अवस्थित छ। यद्यपि वैध जाँच ड्रपहरू आउन कठिन छन्, त्यहाँ उत्पादित मिब्रोरोन धेरै भूमिगत संस्करणहरू छन् जुन भूमिगत बजारबाट आदेश गर्न सकिन्छ। मूल्य भिन्न हुन सक्छ, तर अन्त्यमा, प्रति मिली मिलीग्राम यो डेरा Durabolin र Dianabol जस्तै अरू भन्दा तुलनामा एक सुन्दर महंगा स्टेरॉइड हो। धेरै भूमिगत प्रयोगशालाले तयार उत्पादनहरू बनाउन अनलाइन बिक्रीको लागि कच्चा माइबिलोरो किन्छन्।
टैग: माइबिओलोन पाउडर किन्नुहोस्, मिबिओलोरोन पाउडर
Tykerb (231277-92-2) - स्तन क्यानरको हत्यारा MAGL अवरोधक JJKK-048 आपूर्तिकर्ताहरू अनलाइन
Maury Cheskes on विश्वको शीर्ष 10 उत्तम बेचन वजन घटाने पाउडर पूरक
कैरी on विश्वको शीर्ष 10 उत्तम बेचन वजन घटाने पाउडर पूरक
लौरा on विश्वको शीर्ष 10 उत्तम बेचन वजन घटाने पाउडर पूरक
AJ on विश्वको शीर्ष 10 उत्तम बेचन वजन घटाने पाउडर पूरक
AJ on -Phenylpiracet को बजार मा7बेस्ट नोट्रोपिक्स (स्मार्ट ड्रग्स)